192.168.2.1 Anaran'ny mpampiasa & Password - 192-168-1-1l.com
Janoary 9, 2019 Denial245
Inona ny 192.168.2.1?
192.168.2.1 dia iray amin'ireo adiresy IP malaza indrindra izay zatra miditra ny aterineto ny router-interface tsara. izany 192.168.2.1 IP adiresy dia matetika ampiasain'ny sasany router.
Rehefa nividy ny ny router avy amin'ny mpanamboatra, izay mampiasa adiresy ity, antoka fa toerana misy anao adiresy IP dia 192.168.2.1, fa aza manahy ny momba izany - afaka haingana nametraka tsara kokoa ny adiresy IP.
The 192.168.2.1 dia ny toerana misy anao adiresy IP ho an'ny isan-karazany router, anisan'izany ny ankamaroan'ny modely avy Belkin ary ny sasany avy amin'ny modely Siemens, Edimax, ary SMC, na izany aza, dia azo ovana.
Ahoana no Login sy Setup Belkin Wireless Mampiasa ny router 192.168.2.1?
➥ Mampifandray ny solosaina ho iray amin'ireo 4 Lan na nampifandraisina mivantana seranana
➥ Dia sokafy ny misy Internet navigateur sy Enter Sokajy://192.168.2.1 an-tranonkala navigateur ny adiresy fisotroana.
➥ Ny lamba fidirana ny router dia tokony tonga, avy eo tsindrio eo amin'ny bokotra ny fidirana ary avelao ny teny miafina banga ary tsindrio eo amin'ny bokotra ny hanaiky.
➥ Next, eo ambanin'ny faritra Wireless tsindrio eo amin'ny fantsona sy SSID Button
➥ Dia ao amin'ny SSID Box manoratra NetVN_2.4G sy NetVN_5G ary tsindrio eo amin'ny bokotra ny mampihatra ny fanovana.
➥ Next Tsindrio eo amin'ny fiarovana Change bokotra tenimiafina.
➥ Next, eo ambany WAN Internet Button Tsindrio eo amin'ny Connection Type sy ny marika eo Dynamic safidy ary tsindrio eo amin'ny bokotra manaraka.
➥ Ary eny Name karazana NetVN_Belkin ary tsindrio eo amin'ny fanovana ny Ampiharo bokotra.
➥ Ankehitriny mankafy azy io
Login sy ny Setup Belkin Wireless ny router Video
Eto amin'ity lahatsary eto ambany, dia afaka mahazo ny Belkin Wireless Login ny router sy ny Setup dingana tanteraka, dia tsy maintsy mijery ity lahatsary ity.
Izany no zava-drehetra momba ny 192.168.2.1 IP Address Default ny router Username & Password. Manantena aho fa ry zalahy toy ity lahatsoratra ity, fa raha miatrika olana misy mikasika ity lahatsoratra ity, Ary azafady hevitra ho anay dia miezaka mamaha ny olana haingana araka izay azo atao, misaotra mitsidika ny toerana.
Previous Post:192.168.1.254 ny router Login